5 Amanyathelo okuba ngumthengisi we-Auto
Konke Okufuneka Ukwazi Ukuba Ngumnikazi Wezandla Zokuthengisa
Kukho amashishini ambalwa ahlukeneyo njengabathengisi beemoto kweli lizwe, kwaye kwabanye abantu, umngeni wokuba uncedo-okanye phezulu kwinqanaba lommandla, kunye nezitolo ezininzi phantsi kwe-umbrella-kubonakala ngathi ngumngeni ongenakunqandeka. Ukuba ungomnye walabo bantu, kwaye uyazibuza ukuba wenzeni ukuze uqalise, nakhu amanyathelo athile ukukufumana khona.
Ngenxa yokuba uninzi lwabathengi banokuzimelela, umendo wobunini uyinto engavamile.
Kodwa njengawe nawuphi na umashishini, kukho amanyathelo athile okufuneka athathwe ukuze aqalise.
Into yokuqala yokuyenza kukuba uqinisekiswe. Urhulumente ngamnye unikeza iklasi yesatifikethi, okuza kuyidinga ukuba uthathe ngaphambi kokuba uthathe uviwo lweemviwo (ngokuqhelekileyo umrhumo wokuthatha uviwo). Emva kokuba usudlulile uviwo, lixesha lokuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
Indawo, Indawo, Indawo
Iimoto kunye namaloli ziyimveliso yenyama, kwaye uya kufuna iofisi, indawo yokubonisa, kunye nekota. Umsebenzi wokuqala uza kuba kwindawo efanelekileyo. Uya kufuneka kwakhona unqume igama kwigcina. Emva kokuba kuyenziwe, kuya kufuneka uqinisekise ukuba uya kuthengisa iimoto ezisetyenzisiweyo okanye ezintsha. Ukuba ukhetha ukuthengisa iimoto ezintsha, uzakufuna ukungena kwisivumelwano sokuthengiswa kwemali kunye nomenzi-oku ku funeka kuthengwe. Oomatshini baya kuba neemfuno zabo ezilindele ukuba abathengisi babo badibana, njengokungenwa kwento ethile yangaphandle.
Gcwalisa Iphepha Eliyimfuneko
Emva kokuba ukhethe indawo, uqinisekise isivumelwano sokuthengiswa kwemali-mali xa kufuneka, kwaye ugqibe ukuba uluhlobo luni lweemoto zokuthengisa, uya kufuneka usebenze noorhulumente wengingqi ukuba ufumane imvume evumelekileyo yokwakha kunye nokuvunyelwa kwemida. Uya kufuneka kwakhona ukuyila iWebhsayithi ukunceda ukutyeba ishishini.
Emva kokufumana imvume evela kurhulumente wakho wasekuhlaleni, uzakufuna uxhamlwano lokubambisana, onokukukhusela ngokusekelwe kwimbali yakho yesikweletu (unokufuna unobumba obongezelelweyo ukuba umlando wakho ukhululekile). Isibophelelo sokuqinisekisa sivumelwano esithi wena, umthengisi, uya kuhlonipha yonke imirhumo enxulumene nesitolo, kwaye imali ayiyi kuba ngaphantsi kwama-$ 10,000. Uya kufuneka kwakhona ilayisenisi yoshishino.
Ukuba awuhambanga kwisakhiwo esele sikhona, ngokuqinisekileyo kufuneka ufumane inkunzi, enokufumaneka kwi-mboleko yasebhanki, kwaye wakha indawo. Emva kokuba isakhiwo siphelile, kuya kufuneka ukuba uyithenge ngezinto eziqhelekileyo: ifenitshala, iikhomputha, imizila yeefowuni, imishini yefeksi, abaprinta, ukufakela iikhabinethi, iiblukhi, izityalo, umqondiso, imihlobiso, kunye neyona nto ibaluleke kakhulu, imoto kunye namaloli.
Isinyathelo sokugqibela kukudlula iSebe leZithuthi zeeMoto. Xa sele kwenziwe, uya kunikwa iipleyiti zeelayisensi yomthengisi kunye nezinye iifom ezinikezelwa nguRhulumente.
Ngokuqinisekileyo, ezo zinto zizona ziqalo eziphambili ze-bureaucratic. Kodwa kukho ngaphezu kwayo. Uya kufuneka ufunde ibhizinisi kuqala, mhlawumbi ngokuthengisa izimoto, ukulawula umthengisi, okanye ukusebenzela umenzi wezithuthi. Kukho iikholeji ezinekharityhulam ezifundisa abafundi ukuba babe ngabani kwaye baphathe umthengisi.
Kuya kufuneka kwakhona ukuba ufumane i-capital ukuze uqale, enokuba nzima ukuba awufumani imvume yokubolekwa kwebhanki. Kwaye uza kufuneka ukhethe indawo ngokunyamekileyo ukuba ukhetha ukuba ube ngumthengisi wezinto zokusebenza zokuqala (OEM) -abasebenzisi abayithandiyo xa abathengisi babo besondelene kakhulu.
Enye into ekufuneka iqwalaselwe yinkonzo-abaninzi abathengisa nabo banikezela ukulungiswa kwemoto kunye neenqwelo zokuthengisa ezithengiswayo, kunye neevenkile zokuthengiswa kwemali ezenza ukulungiswa kuya kufuneka zihloniphe iziqinisekiso zemveliso. Amacandelo kunye nesebe lenkxaso-shishini-ekuthiwa "imisebenzi echanekileyo" -nokuba inenzuzo kakhulu xa ilawulwa ngokuchanekileyo, ngoko kulungile ukuba ungayiboni le nxalenye yoshishino.
Okubaluleke kakhulu, uya kufuna ukukwazi ukusebenza nzima. Ukuqhuba ishishini ngumsebenzi wothando, kwaye ekubeni ukuthengiswa kwabaxhasi kunye nokuthengiswa kweentengiso kubomi bokuthengisa imoto, oko kuthetha ukuba ukugcinwa kwegama elihle kuluntu kufuneka.
Indlela engcono yokugcina abathengi beza emnyango-ngokunjalo ukwandisa inzuzo-kukusebenza nzima. Ngaphandle koko, onke amanyathelo angentla angayi kubakho.
Ukuba ulandela iinkqubo ezifanelekileyo, yenza izigqibo zoshishino ezilungileyo, kwaye usebenze nzima, nawe unokuba ngumthengisi wemoto.
Yintoni efana nokuphila neDucati Panigale?
I-Triumph uBonneville Ixesha elide lovavanyo - Ingxelo # 1
2016 I-Ducati 959 iPanigale Ukuphononongwa: I-Ride yokuqala ye-Ducati yeNew Mid Mid
Ukujonga kwiiNkonzo zeeNkonzo zokuThunywa kweeMoto
I-Confederate P51 Fighter Combat Review
U-Yamaha R1 R1 oMgwaqo: Isihlalo sePants Review
Indlela yokuchonga ukuba ikhompyutha yakho i-32-Bit okanye i-64-Bit
Ukuqonda 4 Iintlobo ezahlukeneyo zobuhlanga
Inkcazo yeJava Ixesha: Iparameter
Udidi olukhethekileyo Utshintsho kwi 'Star Wars Isiqendu VI: Ukubuya kweJedi'
Indlela yokwenza iGlasi usebenzisa i-Grill yakho
I-Burundanga Iyezaziso Zamayeza: Amaqiniso
Izakhiwo zeMichiza eziQala ngeNcwadi G
Ukwenza isikolo esizimeleyo sithengiswe kwiBanga eliphakathi
Ix Chel - UThixokazikazi weMeya (es) weNyanga, ukuNzala kunye nokuFa
Iintembelelo zokuQiniseka ezine
Izizathu ezi-5 zokungabikho kwizindlu zasemakhaya
I-10 ephezulu ngokuvuyisayo ngonaphakade emva kweeNcwadi zoThando
Indlela Yokufumana I-TreeView Node Ngombhalo
Iimvumi eziphezulu zokudlala ii - '80s
Kutheni amaJapan nee-American Akunabantwana abafanele baKhunjulwe njengeziGufa